Farxiya kabayare 2016 Muqdisho Video daawo - iftineducation.com
Farxiya kabayare 2016 Muqdisho Video daawo
iftineducation.com – Fanaanadda caanka ah oo heesta oo lagu magacaabo Farxiya kabayare ayaa waxay tagtay magaalada muqdisho, waxay soo gudbin rabtaa bandhigyada ciida sanadkan, sanadah oo lagu sheego muqdisho inay noqotay meel nabad ah oo dadka fanaaniinta ah ka soo jeediya xafladaha.
fanaaninta soomaaliyeed badankooda waxay ku nool yihiin dibadda gaar ahaan dowladaha reer galbeedka.
farxiya kabayare waxay ka mid tahay fanaaniinta aadka looga jecel yahay xamar, iyada waxay ku nooshahay dalka Australia.
Videoga ayay hadda kula hadlaysaa dadka iyada jecel oo ka helo heesaha ay soo jeediso ama cudka ay leedahay, heesaha oo maanta ay ku tartamaan fanaaniinta iyo xagga codka, gabdho badan iyo wiilal badan ayaa aad u dabada gala heesaha ay soo jeediso farxiya kaboyare.
muuqaalkan waa muuqaal laga soo duubay iyadoo joogta magaalada muqdisho waxaad arkaysaa sida ay muqdisho isu badashay.
suugaanta iyo heesaha iyo geeraarka iyo gabayada maanta oo aad ay u xiiseeyaan shacabka soomaaliyeed ayaa haddana la sheegayaa inay dadka gabyaaga ah aad u yaraadeen.
Fanaanka sidee buu heesta u qaadaa?
Dad badan waxay moodaan in fanaanka heesta isaga allifaya, dhabtana waa si sidaas ka duwan, qofka fanaanka codka keliya ayuu leeyahay, heesta waxaa allifa qof ah gabyaa ama laashin markaas waxaa laxni saara nin mulaxin ah, kaddib waxaa heesa heesaaha sheekada taas ayay soo martaa ee ma aha ninka inuu iska heesayo.
Heesaha xadka ka baxsan
heesa qaar aad ayay ugu xeeldheeraadaan tilaanta ama hadalka soo jiidashada leh, waxaad arkaysaa hadalo oo qaab daran ama xishoodka ka baxsan inastoo soomaalida sheekadaas ay ku yar tahay, dad somali jooga ama dibada jira oo fanaaniin ah heesahooda inta badan ma taabtaan waxyaalaha aadka u foosha xun, waxaa ugu badan aya tilaamaan waa jacayl ninka iyo naagta sida ay isaga helayaan.
Fanaaniinta hore ee soomaaliyeed
dadkii hore iyo kuwa hadda farqi baa u dhxeeya xagga heesaha ama gabayga xitaa, abwaan hore iyo abwaan hadda jooga aad bay u kala duwan yihiin
Xariif Marqaan ah ayaa Yaanyuur Bisad guriga u joogtay aad… sii akhri
Naagaha foosha xun maxay sawirada u xadaan